Azụmahịa ndị njem na-ezighi ezi na Sri Lanka emeghe
Mbido » Akụkọ kacha ọhụrụ » trending Ugbu a » Azụmahịa ndị njem na-ezighi ezi na Sri Lanka emeghe
Nzukọ Mmekọrịta Akụkọ • News • Resorts • Safety • Akụkọ Sri Lanka • Tourism • Akụkọ Mgbasa Ozi Njem • trending Ugbu a
by Sulochana Ramaia
abhy foto 3
dere Sulochana Ramaia
Na Sri Lanka, enwere ihe ruru otu puku ndị mba ọzọ na-eme njem nlegharị anya na Sri Lanka na-agba ọsọ azụmaahịa dịka ụlọ oriri na ọ restaurantsụ villaụ, ụlọ mmanya, obodo, ebe obibi na Ayurveda spa tumadi na mpaghara ndịda ndịda gbara mmiri na-eweta enweghị ego na Sri Lanka na Director General ( DG) Sri Lanka Tourism kwuru na ha ga-enwe mkparịta ụka na Ngalaba Immigrashọn na Mbata na ọnwa na-abịa iji nyochaa okwu ahụ.
Director General nke Sri Lanka Tourism Dhammika Jayasinghe gwara Ceylon Taa enwere ọnụ ọgụgụ buru ibu nke ndị China, Russia, German, Ukrainians wdg, ndị na-ahapụghị obodo ahụ n'oge COVID-19 ọbụlagodi mgbe enwere ụgbọ elu pụrụ iche. O boro ebubo na ụfọdụ n'ime ha ahapụghị nwere ike ịbụ ndị na-etinye aka na azụmahịa njem nlegharị anya na-edeghị aha, ka ọ gbakwụnyere.
N'etiti Weligama ruo Mirrissa n'ụsọ oké osimiri, e nwere ọtụtụ narị azụmahịa dị otú ahụ a na-edeghị aha na-aga, Ceylon Today na-amụta site na ebe a pụrụ ịdabere na ya. Ha nwere nkwado ndị ndọrọ ndọrọ ọchịchị obodo na ndị ọzọ na-echebe ha maka ego. Ọbụna ha na-agba mmanya na-aba n'anya na-enweghị ikikere ọ na-ebo ebubo.
Ndị ala ọzọ ahụ na-agbazite ụlọ na ụlọ ahịa ndị bi na mpaghara ma degharịa maka ụtọ ha iji dọta ndị njem nleta na-akwalite ya site na ntinye akwụkwọ ha n'ịntanetị.
A na-ebo ebubo na ndị obodo ahụ na-enyefe ụlọ ndị ahụ na mgbazinye ma biri n'ime ụlọ mgbe ha nwetasịrị ego n'aka ndị mba ọzọ.
“Ndị ngalaba na-ahụ maka ọpụpụ gwara anyị na e nwere ọtụtụ ndị mba ọzọ na-eme ka visa ha dị ọhụrụ na ụfọdụ ọbụna tupu ntiwapụ COVID-19 nọ na-eme.
Ọ bụ ezie na e nwere ọtụtụ ndị ọchụnta ego si mba ọzọ na ndị nwe ụlọ oriri na ọ hotụ hotụ ndị debanyere aha na SLTDA ma na-azụ ahịa n'ụzọ iwu, enwerekwa ndị na-edebanyeghị aha ma na-aga n'ihu na-apụ na mgbanwe mba ọzọ nke pụtara maka Sri Lanka. “Ego ha nwetara site na ntinye akwụkwọ ntanetị anaghị abịa Sri Lanka, ka ọ gbakwụnyere.
Na Ambalangoda enwere Ayurveda spas nke ndị German na-emeghị nkwado nke ndị njem njem. Ndị a na-efega Maldives ma ọ bụ India wee laghachi na-emegharị visa ha n'otu izu ma ọ bụ karịa ma na-aga n'ihu na-azụ ahịa, "isi iyi a pụrụ ịtụkwasị obi gwara akwụkwọ akụkọ ahụ. Azụmaahịa ha na-etolite na nnọkọ ahụ n'oké osimiri ma na-eme nnukwu ihe omume na-eme ka ndị ọbịa si mba ofesi na-eme ndokwa ha n'ịntanetị, isi iyi ahụ kwuru. Ka ọ dị ugbu a, ọtụtụ obodo, ụlọ oriri na ọ pubụ hotelsụ, na ụlọ mmanya nke ndị ala ọzọ na-emechi emechi n'ihi ụjọ COVID19 na ọ ga-apụta ọzọ mgbe emepere ọdụ ụgbọ elu mba ụwa, isi mmalite ahụ kwuru